Xiaomi Home App configurement - fanovana ny faritra - mini-guide - SmartMe
Tutorials, Fandraisana Xiaomi
Manova ny faritra amin'ny tranokala Xiaomi - torolàlana kely
1 Novambra 2019
Aqar, torolalana ho an'ny rehetra, xiaomi mahay trano, xiaomi trano
Mitranga izany tamin'ny fotoana voalohany nitodihanao ny fitaovana tsy hitanao azy amin'ny fampiharana Xiaomi Home, izay midika fa tsy afaka mametraka azy io isika (mifandray amin'ny trano voafidy sy hifehy amin'ny alàlan'ny smartphone). Ny antony dia mety ho samy hafa, ao anatin'izany:
tsy misy fifandraisana WiFi (na amin'ny router na amin'ny telefaona),
modely diso lalana lalana
tsy mifandray Bluetooth amin'ny telefaona,
ny filàna hanatanteraka fanarenana fitaovana vaovao (fomba samy hafa miankina amin'ny fitaovana).
nitaky vavahady ZigBee (araka ny voalaza eto Article),
ny Faritra diso dia voafantina ao amin'ny rindranasa.
Amin'ity lesona ity dia te-hifantoka amin'ny teboka farany aho. Ny fitaovana avy amin'ny tontolo iainana Xiaomi dia ho hita eo amin'ny fampiharana Xiaomi Home ihany rehefa mametraka ny faritra mety amin'ny fampiharana izahay. Ho an'ny vokatra baikoin'ny magazay toa AliExpress, Gearbest na Banggood, dia matetika izy io no faritra "China" (raha tsy hoe ny mpivarotra nanondro raha tsy izany tamin'ny famaritana ny vokatra). Raha manafatra ilay fitaovana amin'ny fivarotana poloney izahay, dia misy ny vintana hisian'ny faritra izay tsy maintsy apetrakay dia ny "Poland".
Tokony ho voafantina tsara ireo vokatra efa namboarina, satria isaky ny te-hifehy singa iray avy amin'ny Faritra hafa isika dia tokony averina ity fampiharana manaraka ity ao amin'ny Xiaomi Home app, izay fandaniam-potoana sy fanelingelenana. Ankoatr'izay, tsy afaka mamorona Fitsipika sy Scenes ianao amin'ny fampiasana automatique misy faritra any amin'ny Faritra samihafa amin'ny fampiharana anay.
Ity ambany ity dia manolotra torolàlana momba ny fanovana ny Faritra nofidina.
1. Alefaso ny fampiharana Xiaomi Home
2. Manana fanadiovana rivotra mifandray amin'ny mpizara ho an'i Polonina ny efijery. Mandehana any amin'ny Profile
3. Mandehana any amin'ny Settings
4. Mankanesa any amin'ny Faritra
5. Safidio amin'ny lisitra izay mahaliana anao ilay faritra (amin'ity tranga ity ho an'ny fitaovana natao ho an'ny tsena sinoa). Tsindrio ny Save sy hanamafy ao amin'ny varavarankely pop-up tianao ny hanovana ny faritra
6. Hanomboka ny fampiharana Xiaomi Home ary hangataka anao hiditra. Ampidiro ny antsipirihany ary tsindrio Log
7. Nahomby ny fanovana ny faritra. Eo amin'ny efijery ianao dia mahita ny fitaovana ampiarahiko amin'ny mpizara ho an'i Shina
8. Azonao atao ny miditra ao amin'ny lisitry ny mombamomba anao mba hahazoana antoka hoe Faritra izay nosafidinao amin'izao fotoana izao
Izay ihany. Araka ny hitanao, ny fanovana ny Faritra ao amin'ny fikirakirana fampiharana Xiaomi Home dia zava-dehibe ihany. Ny fomba fiasa iray manontolo dia tsy mitaky fahaizana manokana ary azon'ny tsirairay atao, tsikelikely, mifanaraka amin'ny torolalana voalaza etsy ambony.
Xiaomi Home App - inona no tokony ho fantatrao?
Aza adino fa ny fototry ny asa ao anatin'ny Xiaomi Home App dia ny fananganana kaonty Mi maimaimpoana. Ny fizotry ny fisoratana anarana dia tsy mitondra olana fanampiny. Ny logicielin'ny mpanamboatra sinoa dia mamela ny hampidirana ireo fitaovana ao aminy, izay ny fisainana mamolavola sy fampiharana ny trano hendry.
Anisan'ireo fitaovana namboarina hiasa miaraka aminy Xiaomi Home App azonao atao ny milaza:
Mpitroka ny loto ao,
Ny fifehezana azy ireo, ary koa ny fanaraha-maso lavitra dia tsy misy dikany, ary koa ny fametrahana vahaolana izay manalefaka ny asan'ny trano marani-tsaina. Ny fiasa sasany dia miasa arakaraka ny fahaizan'ny finday manokana - ohatra, ilaina ny IR IR hamadika ny telefaona ho lasa fanaraha-maso lavitra tsy misy fepetra.
Ny vahaolana natambatra ao anaty fampiharana Xiaomi Home dia miha malaza hatrany, ankoatra ny fahalianana miantsena amin'ny alàlan'ny Ali Express. Ny fandefasana ny fivarotana ofisialy an'io marika io tany Polonina dia lehibe.
Ny fampiharana Xiaomi Home voalamina tsara dia ahafahanao mifehy ireo karazana fitaovana efa voalaza, ary koa ny automatisation. Ny fionona isan’andro dia hahatsapa, ankoatra izany, ao an-dakozia, trano fandroana, efitrano fandraisam-bahiny na efitrano hafa amin'ny trano, trano na birao. Antenaina fa ny taona ho avy dia hitondra kojakoja fanampiny amin'ny marika sinoa.
Mahaliana fa taona vitsivitsy lasa izay dia tsy nanantena ny ho malaza be ny rafitra Xiaomi eny an-tsena poloney. Tsy nisy nieritreritra fa azo atao ny mametraka ny fiteny poloney sy Poloney ho toy ny faritra. Androany, tsy manahy ny momba ny sakana fiteny na fananganana fitaovam-panamboarana fanafarana avy any ivelany ianao. Ny mpitari-dalana dia mahatonga ny fametrahana ny faritra mety sy hanamorana ny fampidirana rafitra feno amin'ny fampiasana poloney.
Ny fampandrosoana ny fampiharana ao an-tokantrano dia mifandraika amin'ny fitomboan'ny fahalianana amin'ireo singa sinoa mahay an-trano. Ny fivarotana ireo finday sy fitaovana Xiaomi hafa - ankoatry ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha malaza miasa any Polonina - dia iray amin'ireo fironana mahaliana indrindra amin'ity orinasa ity. Ny mavesatra ho an'ny marika malaza kokoa dia manome aingam-pitokisana sy matoky an'i Poles miaraka amin'ny sandan'ny vola ilaina.
Ny tranonkalantsika dia noforonina ho an'ireo mpampiasa liana amin'ny teknolojia Smart an-trano. Raha mitady fanazavana bebe kokoa momba ity lohahevitra ity ianao dia jereo ny media sosialy na avelao ny hevitrao. Faly izahay fa mamaly fanontaniana mety kokoa momba ny fandidiana ity fampiharana ity. Tsy misy olana tsy voavaha olana, ary ny fananganana tsirairay dia mitaky tsindrio vitsy fotsiny, isaky ny dingana.
Mampiavaka ny haitao vaovao izay tsy misy farany ny heviny! Mikaroka fitaovana vaovao foana izy, mba hisedrana, mamolavola vahaolana maranitra ary manamboatra ny tenany. Lehilahy orkestra sady mandihy be koa! Sal. nahita ny fomba hifandraisany amin'ny famantaranandro shinoa fanairana, koa manaja;)
Jiro adaptatera natolotra ho an'ny vokatra Aqara
Ny jiro adaptatera dia ahodina tsikelikely avy amin'ireo mpanamboatra fitaovana mifanaraka amin'ny HomeKit. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, ny dingana toy izany dia noraisina tao amin'ny Eve Light Strip sy Philips Hue. Ankehitriny dia hitombo ny vondrona Aqara vokatra. Aqara miaraka amin'ny ...
Apple HomeKit, hevitra, Fandraisana Xiaomi
Aqara T1 - famerenana relay Aqara ho an'ny fametrahana amin'ny N
Aqara T1 dia switch ho an'ny tsena eropeana izay hifanaraka tanteraka amin'ny fametrahana amin'ny fantsona tsy miandany!
Aqara H100 - ny hidim-baravarana vaovao manan-tsaina
Aqar, aqara h100, homekit, hidy maranitra
Aqara dia manohy ny paikadiny amin'ny fanitarana ny tolotra misy azy miaraka amina vokatra an-trano manan-tsaina vaovao. Ireo fitaovana ireo dia aseho miaraka amin'ny fahita matetika, toy ny ohatra navoakan'ny premiere farany farany momba ny hidin-trano H100 farany fakan-tsary miaraka amina fakan-tsary. Ny vokatra amin'izao fotoana izao dia ...
Apple HomeKit, Tutorials, Fandraisana Xiaomi
Fampitahana Sonoff Mini vs Aqara T1 - afaka 3 minitra!
Aqar, Aqara t1, hanazava, sonoff, sonoff mini
Inona koa ny HomeKit? Sonoff Mini sa Aqara T1? Iza amin'ireo no ao amin'ny WiFi ary iza amin'ny ZigBee? Voavaly tao anatin'ny telo minitra ny fanontaniana rehetra!
Apple HomeKit, hevitra, Smart Home, Fandraisana Xiaomi
Aqara T1 tsy miandany - Famerenana ny relay isaky ny trano
5 Martsa 2021
Aqar, Aqara t1, tsy miandany, tsy miandany, hanazava
Misy trano fonenana iray lehibe. Misaotra an'i Aqara T1, tsy hisy olon-kendry tsy miandany hitranga! Ity no fomba ahafahantsika mamaritra ity relay ity amin'ny teny fohy!
Apple HomeKit, Google Home, hevitra, Smart Home, Fandraisana Xiaomi
Aqara T1 tsy misy fiandany - Mety ho marani-tsaina koa ny birao lehibe!
Aqar, Aqara t1, Aqara T1 tsy misy fiandany
Niaina an-tsoratra lehibe tamin'ny fiainako manontolo aho. Ka ao anatin'ireo andian-fisaka taloha sy mainty taloha. Rehefa nifindra tany amin'ny fananganana vaovao aho vao nanomboka nieritreritra trano mahira-tsaina, fa na dia eto aza dia tratry ny nofy ratsy noho ny tsy fahampiana ...
Aqara T1 miaraka amin'ny tsy miandany - famerenana ny famindrana Aqara vaovao
Aqar, Aqara t1, hanazava
Ny fampitàna ahy voalohany tao anaty boaty dia ny Aqara Relay. Izy no namela ahy hibaiko ny takaloko. Na izany aza, tsy nisy lesoka izany. Aqara namokatra izany ho an'ny tsena sinoa, vokatr'izany ...
Aqara mora vidy amin'ny 15% ihany mandra-pahatapitry ny febroary
Raha nanontany tena ianao hoe rahoviana no haharitra ny fampiroboroboana anay amin'ny fizarana ofisialy Aqara, maika ny hampahafantatra anao izahay fa hatramin'ny faran'ny volana febroary izao! 15% - izao no azonao atao izao amin'ny fikitihana ny sorabaventy sy ...
Jiro vaovao Aqara H1 no mandeha eo an-dàlana
19 Febroary 2021
Aqar, Aqara mody, jiro resaka
Tsy ho ela dia hiseho eo amin'ny tsena ny switch vaovao Aqara H1. Ireo dia ho switch Aqara natokana ho an'ny tsenantsika eropeana! Etsy ambany no ahitanao ny sary voalohany azonay! :) Raha tokony hanandrana famolavolana vaovao tanteraka, ny switch EU dia ...
Tsy misy sensor amin'ny tondra-drano ao amin'ny Mi Home? Mialà sasatra, tsy fahombiazana fotsiny io
17 Febroary 2021
Ny mpampiasa sasany ny rindranasa Mi Home dia mety nahatsikaritra fa nanjavona ireo sensor tondra-drano ... Araka ny efa hitantsika, ity dia bibikely ao amin'ilay fampiharana izay hamboarina tsy ho ela. Ny olana dia ireo sensor Aqara tondra-drano izay ... nanjavona fotsiny. Tsia ...